China Hot Sale Steam Hot Water Retort Sterilizer Autoclave Vidiny ho an'ny famokarana sakafo sy ny orinasa | Shenlong
Varotra mafana fivarotana rano mafana Retortilizer Autoclave vidiny ho an'ny sakafo fihinanam-borona
Retort no fitaovana ampiasaina amin'ny fanamainana ny sakafo am-bifotsy am-bifotsy asidra, mihoatra ny 100 temperature ny maripana ary mihoatra ny 6 volana ny talantalana. ny mari-pana mamaly sy ny fotoana dia napetraka araka ny vokatrao.
1.Our retort material: ampiasao SS304 na 316, retort flanges ary loha izay nampiasainay no kalitao avo indrindra any Shina.
Rafitra fanaraha-maso 2.Control: ny rafitra fanaraha-maso SIEMENS dia manome antoka fa ny mpanjifa dia afaka mahita ara-potoana ny rojom-panolorana eto amin'izao tontolo izao mba hampihenana ny ora fijanonana.
3.Resort fiarovana fiarovana: raha tsy mihidy ny varavarana retort dia tsy hanomboka ny fizotrany; ny varavarana tsy azo sokafana raha misy tsindry retort anatiny; miaraka amin'ny valizy azo antoka mba hialana amin'ny tsindry valin'ny ultrahigh.
4. Mihazakazaka mafy ny fitaovantsika hisorohana ny tabataba be
rano retort retort dia ny manondraka rano ao anaty vokatra, mazàna, ny retort spray an-drano dia misy exchanger hafanana hampisarahana ny rano anaty rano avy amin'ny etona sy rano mangatsiaka, mba hiantohana ny vokatra tsy ho voaloto.
Raha ampitahaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny nentin-drazana, ny retort famafazana rano dia mampiasa rano sy etona kely kokoa, afaka mamonjy angovo izy io.
1. Haavo ambony noho ny mandeha ho azy. Ny vilan'ny fanamorana dia mandray valves pneumatika 15, ary ny fizotran'ny fampidirana rano, ny famenoana ny rano, ny fanafanana, ny hafanana, ny fampangatsiahana, ny fifehezana ny tsindry ary ny fantsohana dia voafehy ho azy. Izy io dia manana fiasan'ny diagnostika amin'ny lesoka ary afaka mametraka ny paikadin'ny fizotrany, ny fanafanana dingana telo, ny fampangatsiahana malefaka sns.
2. Ny fanamorana ny rano voadio dia mandray ny teknolojia fanangonana rano sy fanamafisam-peo tsy misy scaling ao anaty vilany, ary madio ny tampon'ny fonosana, noho izany dia azo avotana ny vidin'ny fividianana fitaovana fitsaboana rano malemy.
3. Fanafanana sy fampangatsiahana tsy mivantana, tsy misy fandotoana faharoa, fanodinana rano tsy mivantana na ampangatsiahana amin'ny alàlan'ny hafanana, tsy misy fandotoana faharoa, indrindra mety hampangatsiaka ny ranomasina.
4. Mety amin'ny fitaovana fonosana isan-karazany. Satria ny rano mangatsiaka dia tsy arotsaka mivantana ao anaty vilany mandritra ny fizotran'ny fihenan-tsakafo, dia azo ampiasaina ny tahan'ny fampangatsiahana malefaka amin'ny famonosana tavoahangy vera marefo mba hisorohana ny fahatapahan'ny tavoahangy ateraky ny tsy fitovian'ny hafanana be loatra. Ity endri-javatra ity koa dia mety amin'ny akorandriaka, toy ny sifara. Raha lehibe loatra ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana, na lehibe loatra ny tsy fitovian'ny maripana dia ho tapaka ny akorany
5. Ny fanaraha-maso tanteraka ny tsindry, ny rafitra fifandanjana fanerena sterilisation mety amin'ny fonosana misy gazy dia zava-dehibe amin'ny fanafoanana ny fonosana misy entona, indrindra amin'ny dingana mangatsiaka, izay mitaky fifehezana tsindry. Ny rafitra fanaraha-maso dia afaka manara-maso tsy tapaka ny mari-pana sy ny tsindry ao amin'ny fitoeram-pamokarana, ary manitsy ny tsindry ao anaty tanky mba hifanaraka amin'ny tsindry ao anaty fonosana. Ny fonosana feno rivotra na etona isaky ny isan-jato, na fonosana voaisy tombo-kase ao ambany fantsom-pifandraisana dia azo esorina amin'ny tany tsy miteraka fahasimbana na fanovana amin'ny fonosana na ny atiny
6. Fitaovana fiarovana efatra. Valizy azo antoka, fanakaikezana, varingarina, fifandraisan-tanana.
7. Rafitra fanaovana tatitra tonga lafatra. Ity fitaovana ity dia misy tatitra momba ny lesoka, tatitra feno momba ny fanamorana, tatitra fiarovana *, sns.
8. Fiasa fanadinana sanda Wireless F. Ny refin'ny hafanana sy ny hamafin'ny sterilization dia azo refesina. 9. Ny singa fanaraha-maso lehibe ao anaty vilany fanamafisana dia avy any ivelany avokoa, ny tahan'ny tsy fahombiazana dia ambany dia ambany, ary avo ny fahamendrehana. Tokony handinika ihany koa ianao rehefa mifantina kitapo mahandro hafanana ambony.
nandray ny haitao mandroso mandroso izahay, manome antoka ny famehezana ny masininay
Anarana: Touch Sreen
Nampiasainay ny efijery sy ny maodera Siemens nafarana, fa tsy ny efijery sy ny modely mikasika an'i Siemens
Anarana: fitaovana fanoherana ny hovitrovitra
Ny masininay dia manana fitaovana Anti-vibration hiarovana ny paompy.
* Jereo ny Factory.
* Fiofanana amin'ny fomba fametrahana ny masinina, fampiofanana amin'ny fampiasana ny masinina.
* Injeniera misy amin'ny milina fanompoana any ivelany.
Ny fonosana fandefasana anay dia mety amin'ny fandefasana any ivelany, ny masininay dia raikitra ao anaty kaontenera ary ny ampahany dia tototry ny raharaha hazo.
Teo aloha: Masinina Retort marindrano miaraka amin'ny fizotran'ny fitrandrahana rano ho an'ny paosy retort
Famerenana rano feno mandeha ho azy
Retort Rotary mandeha ho azy feno rano
Autoclave famonoana rano mitsivalana
Famerenana Rotary rano semi-mandeha ho azy
Retort Sterilizer amin'ny fandroana rano
Famerenam-bidy Rotary Pilot Rotary ho an'ny laboratoara